Wasaaradda Amniga: Alshabaab sida ay dadka u dilaan ayaa loo dilayaa – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wasaaradda Amaanka Qaranka Soomaaliya ayaa sheegtay in Alshabaab loo dili doono sida ay dadka u dilaan oo aan wax naxariis ah loo sameyn doonin wixii xilligaan ka dambeeya.
Afhayeenka Wasaarada Amniga Xukuumadda Soomaaliya, Maxamed Yuusuf Cismaan oo la hadlay Warbaahinta ayaa fariin hanjabaad ah u diray dhalinyarada ka midka ah Al-Shabaab, waxaana uu ugu goodiyay in dowladda aysan dhaafi doonin ninkii Al-Shabaab ah oo la qabto.
“Waa dhamaatay wixii hore nimankaan sida ay wax u dilayaan oo ay u dhaqmayaan ayaa loola dhaqmayaa wax badan bay dowladda fursad siisay dhallinyarada ku jira Al-Shabaab oo kasoo baxa la dhahay laakiin waa ay diideen” ayuu yiri Afhayeenka Wasaarada Amniga Soomaaliya.
Maxkamadda ciidamada ayaa muddo bil ah Muqdisho ku toogatay 6 ka itrsan Alshabaab, iyadoo shalayna labo kale ku xukuntay dil toogasho ah.
Alshabaab ayaan wax naxariis ah u sameyn dhamaan dadka kala duwan ee u shaqeeya dowladda Soomaaliya ama hay’adaha ay dalka ka mamnuuceen.
Somaliland oo ka carootay barnaamij faneed loo duubay SNTV & Universal